Tsy misy tsy fahampiana fireharehana orinasa. Azonao atao ny mahita ny famantarana azy hatraiza hatraiza ary afaka miditra ao anaty fikambanana rehetra izy. Raha vantany vao manomboka mieritreritra ny fikambanana fa mahalala tsara noho ny mpanjifany dia manomboka very ny tady. Mahaliana ahy fa orinasa maro no manapa-kevitra fotsiny fa tena olana io rehefa misy ny fifaninanana tsaratsara kokoa. Amin'izay fotoana izay dia manome tsiny ny fifindra-monina faobe amin'ny fifaninanana izy ireo fa tsy amin'ny tsy fahaizany manokana.
HP - fa tsy miasa amin'ny fananganana fitaovana tsara kokoa (manana mpandrafitra HP vaovao izahay eo am-piasana izay nosoloina androany… Mihevitra aho fa afaka mamoaka pejy 1 eo anelanelan'ny fanamboarana tsirairay), nanapa-kevitra ny HP fa ny fitsikilovana ireo mpiasan'ny orinasany dia hanome valiny nohatsaraina kokoa. … Misy mila manazava izany amiko. Ny orinasa iray izay tsy manaja ny mpiasan'ny tenany dia tsy iray izay iriko hifaneraserana amiko.
Ask.com - Miezaka manatsara ny fampiasana ny motera fikarohana ao aminy, ny Ask.com dia mandefa blitz haino aman-jery hanandrana sy hisarika ny mpampiasa. Maninona ianao no tsy maka an'io vola io ary manao vokatra mendrika hampiasaina? Heveriko fa satria mieritreritra izy ireo fa manana pejy fandraisam-bahiny milay izao dia hampiasa azy ireo bebe kokoa ny olona.
Microsoft - Aza manangana vokatra tsara fa asaivo misintona azy fotsiny ny tsirairay fa tsy manontany azy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarihana azy ireo ho 'fanavaozana mitsikera'. I nanoratra momba an'io. Toa somary madiodio kokoa noho ny noeritreretiko ny fikasan'izy ireo, tamin'ny fanovana ny motera fikarohana nataonao ho MSN tamin'ny fametrahana IE7.
Facebook - miaraka amin'ny famoahana vaovao farany, Facebook dia niantraika tsy nahy tamin'ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpanjifan'izy ireo. Matoky aho fa ho sitrana tanteraka izy ireo noho ny fitarihan'ny orinasa.
Digg - ho fiezahana hanome lanja mavesatra kokoa ho an'ny tantara ao amin'ny motera mpamorona otrikaretina mahery vaika, i Digg dia nametaka izany tamin'ireo mpampiasa heriny, izay mety nampiasa ilay rafitra hahazoana tombony ho azy ireo manokana. Naka fanapahan-kevitra tsara i Digg tamin'ny fanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa REHETRA fa tsy ireo Digger vitsivitsy izay nahazo fahefana bebe kokoa.
8 Septambra 2006 à 7:46
Hafahafa fa vitsy no mahazo io foto-kevitra fototra io. Efa ela i Earl Nightingale no nametraka izany. Mahazo tambin-karama ianao amin'ny raharaham-barotra amin'ny tena serivisy omenao.
Doug tena tsara soratra, tsy mbola nandre momba ireo zavatra ireo taloha.
Ity fehezanteny ity dia mamintina tsara ny zava-nitranga nandritra ny dot com boom sy bust.
"Ny orinasa sasany dia manana mpanjifa lehibe churnâ?¦ ary raha tokony hanandrana hamaha ny olana sy haneho fankasitrahana ny mpanjifa, dia manondraka dolara bebe kokoa fotsiny izy ireo amin'ny fahazoana mpanjifa hanolo ireo izay niala."
Nahafinaritra ahy ilay lahatsoratra.